tanàna tao Vohitranivona Brickaville. Ny antony dia ny fanaovan’ity farany fisandohana antontan-taratasina tanin’olona tany an-toerana. Raha nivoaka ny didy teo anivon’ny fitsarana ambony dia tsy afa-po noho ny fahareseny teo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ilay ben’ny tanàna. Roa taona tsy mahazo manao asam-bahoaka no saziny sy mandoa lamandy iray tapitrisa ariary ary mandoa onitra sivily 10 tapitrisa ariary ihany koa. Efa namoahan’ny fitsarana roa taona tsy afaka manao asam-bahoaka izy nefa dia kandidam-panjakana ao Vohitranivona Brickaville amin’izao fifidianana izao. Ny Didy sivily avoakan’ny fitsarana ambony anefa no didy raikitra amin’ny ady tahaka izao ka mila hahatra avy hatrany. Amin’ny maha kandida azy anefa dia anarany ny ao anatin’ny bileta tokana hofidiana satria efa neken’ny CENI ny maha kandida azy ka tsy azo esorina intsony ao anatin’ny bileta tokana hampiasaina. Fa efa lasa fieren-jiolahy ve ao anaty fanjakana ?